घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू चेक गणराज्य फुटबल खेलाडीहरू Tomas Soucek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो टमास सौसेक जीवनीले उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, प्रेम जीवन (प्रेमिका, पत्नी), परिवार तथ्यहरू, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली विवरण। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो उनको जीवनको कहानीको शुरुमै बर्षदेखि शुरु भएको जुन पूर्ण रूपमा फुटबल स्टार बनेको पूर्ण विश्लेषण हो।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उहाँ दुवै ऊर्जावान मिडफिल्डर हुनुहुन्छ र दुवै रक्षात्मक र हमला गर्ने गुणहरू सहित। यद्यपि धेरैले टमास सौसेकको जीवनी पढेका छैनन जुन धेरै अन्तर्दृष्टि हो। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
टमास सौसेकको बाल्यकाल कहानी:
लाइफ स्टोरी स्टार्टर्सका लागि, फुटबलर त्यस्तै मनपर्दछ पेट्र Čech चेक गणराज्यको हो। टोमास सौसेकको जन्म फेब्रुअरी १ ​​27 1995 XNUMX को २th तारिखमा चेकिया जिल्ला शहर हभलाभ ब्रोडमा भएको थियो। सानो टमास आमा-बुबाका लागि जन्मेका थिए जसको नामहरू उहाँको जीवनी लेखेको समयमा अज्ञात छन्।
टमास सौसेकको परिवार उत्पत्ति:
फुटबलरहरु को लागी धन्यवाद, उच्चारण र आडनाव, उसको राष्ट्रियता को बारे मा कुनै प्रश्न वा शंका छैन। थप रूपमा, फुटबल प्रतिभाको पारिवारिक जराहरू उहाँको जन्म देश - चेक गणराज्यमा धेरै गहिराइमा चल्दछन्।
टमास सौसेकको बढ्दो बर्ष:
के तपाईंलाई थाहा छ कि जवान सौसेक उसको जन्म शहर हभलकभ ब्रोडमा हुर्केका थिए? सहरमा हुर्केका, सौसेक आफ्ना साथीहरू भन्दा टाउको अग्लो थिए। ऊ पनि कलिलो उमेरमा दौड र फुटबल खेलमा ठूलो थियो।
टमास सौसेकको परिवार पृष्ठभूमि:
यो याद राख्नु उपयुक्त छ कि टमास सौसेकका आमा बुबाआमा उसलाई दौड र फुटबल खेल्ने प्रेममा मद्दत पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याइरहेका थिए। वास्तवमा, सौसेकको सानो ज्ञात आमा प्रोफेशनल म्याराथन धावक थिए जबकि उनका बुवा फुटबल उत्साही थिए। सँगै, दुबै आमाबुवाहरूले सौसेकलाई एक सभ्य मध्यम-वर्गको पालनपोषण गरे।
टोमास सौसेकको लागि क्यारियर फुटबल कसरी सुरु भयो:
एक राम्रो स्कुलमा तत्कालीन केटालाई पठाउँदै, टमास सौसेकका आमाबुवाहरू स्थानीय क्लब - एफसी स्लोभन हभ्लिकभ ब्रोड (२००१-२००2001) मा प्रशिक्षणमा अभिव्यक्ति चलाउनको लागि आफ्नो फुर्तिली उर्जा र प्रेम सुनिश्चित गर्न उत्सुक थिए।
सौसेक १० बर्षको उमेरमा उनले एसके स्लाभिया प्राहासँग प्रशिक्षण शुरू गरे। क्लब Havlíčkův Brod बाट धेरै किलोमिटर टाढा थियो। दूरीको लागि धन्यवाद छैन, सौसेक केवल दुई प्रशिक्षण र एक साप्ताहिक खेलमा गयो। पछि उसले फुटबल स्कूलमा एक ठाउँ फेला पारे र नियमित तालिम लिन थाले।
करिअर फुटबलमा टमास सौसेकको शुरुआती वर्षहरू:
यो एसके स्लाभिया प्राहामा थियो कि सौसेकले आफ्नो फुटबल क्यारियरको धेरैजसो वर्षहरू बित्यो - २०० between र २०१aबीच झन्डै एक दशकमा - स्किसेट्समा परिपूर्ण थिए जुन अहिले उसको खेलको शैलीको विशेषता हो।
जब समय सहि थियो, फुटबल फुटबलले स्लाभिया प्रागमा एउटा ठूलो कदम चाल्यो जहाँ उनले आफ्नो लिग डेब्यू गरे र पहिलो-टीम फुटबलको स्वाद पाए। यद्यपि, उसले पहिलो टीमसँग आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन सकेन।
टमास सौसेकको जीवनी - रोड टु फेम कथा:
स्लाभिया प्रागले सोसेकलाई अन्य क्लबहरूमा loanण पठाउन सुरु गर्नु भन्दा पहिले यो कुरा भएको थियो। पहिलो विक्टोरिया इल्कोभ थियो जहाँ युवा खेलाडीले आफ्नो अभिभावक क्लबमा फर्कनु अघि कुनै प्रभाव पार्न सकेन।
२०१––१– सत्रमा, सौसेकले स्लोभिया प्रागको पहिलो टोलीसँग आफ्नो स्थान गुमाए र जाडो हस्तान्तरण विन्डोको बखत स्लोभेन लिबरेकलाई loanण दिए। यद्यपि perण पूरा भएपछि स्टपरले आफ्नो प्यारेन्ट क्लबलाई फिर्ता गर्यो, अन्तिम उनको hisण मंत्रको बारेमा अझै सुन्न सकिएन।
टमास सौसेकको जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
२० 2020० मा जनवरीमा सौंसेक प्रिमियर लिगको टीम वेस्ट ह्यामसँग शुरुवात sideण सम्झौतामा लड्दै रिलगेसनमा सामेल भएपछि उनको करियरले अचानक प्रगतिशील उफ्रन थाल्यो। यद्यपि यो सम्झौता चेक गणतन्त्र बाहिर सौसेकको पहिलो हो, उनले अंग्रेजी फुटबलमा छिटो छान्छन् र पूर्वी लन्डनमा ठूलो प्रभाव पारे।
कुनै समयमा उहाँ फ्यान मनपराउनुभएन र आफ्नो पक्षलाई स्कोरि key गरेर र धेरै कुञ्जी ट्याकलहरू तानेर रिलीगेशन जोनबाट बाहिर रहन मद्दत गर्न जानुभयो। लेखनको समय अगाडि छिटो, Tomas नयाँ प्रशंसकहरु लाई नयाँ को रूप मा देखा पर्दछ पावेल नेवेद.
फुटबल प्रेमीहरूले डिफेन्सिवल मिडफिल्डरलाई वेस्ट ह्याममा स्थायी रूपमा हस्ताक्षर गर्न धेरै पटक प्रतीक्षा गर्न सक्दैन किनकि उसले क्लबलाई बचाउको ठूलो आशा प्रदान गरेको छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
टमास सौसेकको प्रेमिका र बच्चाहरूको बारेमा:
सौसेक आफ्नो प्रेमिका नतालियासँग वैवाहिक सम्बन्धमा आनन्दित छिन्। जब lovebirds डेटि began शुरू भयो बारेमा धेरै थाहा छैन। यद्यपि, तिनीहरू पनी वेस्ट ह्याममा डिफेन्सिबल मिडफिल्डरको कदम भन्दा पहिले धेरै वर्षहरू सँगै थिए।
टोमा सौएकको परिवार- उनकी श्रीमती र छोरीलाई भेट्नुहोस्। ।: इन्स्टाग्राम
Lovebirds सँगै एक छोरी छ। उनको नाम Terezka हो। सौसेकले उनकी प्रेमिका र छोरीलाई धेरै माया गर्छिन्। त्यस्तै, जब उनले महत्वपूर्ण क्यारियरका निर्णयहरू लिन्छन् उनीहरूको चासोलाई ध्यानमा राख्न उहाँ सक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ।
टमास सौसेकको पारिवारिक जीवन:
धेरै जसो स्टपरको सौसेकले सहयोगी परिवार पाएकोमा आशिष्‌ दिन्छ। यहाँ, हामी तपाइँलाई टमास सौसेकका आमा बुबा, भाईबहिनी र आफन्तहरूको बारेमा तथ्य दिन्छौं।
टोमा सौएकको परिवारलाई भेट्नुहोस्। ।: Picuki
टमास सौसेकका बुबा र आमाको बारेमा:
सौसेकका आमाबाबुलाई थोरै ज्ञात छ। जे होस्, हामीलाई थाहा छ कि उसकी आमाको एथलेटिक्समा एक व्यवसायिक म्याराथन धावकको रूपमा धनी इतिहास थियो। अर्कोतर्फ, उसको बुवा फुटबलमा प्रशिक्षकको रुचि छ। उसले दुबै आमाबाबुलाई प्रशिक्षणको लागि ड्राइभमा मोड लिनको लागि श्रेय दिन्छ। आश्चर्यचकित छैन कि फुटबलरले उनीहरूलाई हरेक ठूलो खेलमा लान्छ। उहाँ तिनीहरूको आशा अनुरूप जीवन बिताउन कडा मेहनत पनि गर्नुहुन्छ।
टमास सौसेकका भाईबहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
साक्षात्कारको क्रममा जब उनले आफ्नो जीवनको कथाहरू सुनाउँदछन् तब सौसेकले कुनै भाइ वा बहिनी भएको उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, त्यहाँ एक सम्भावना छ कि उहाँ आफ्ना बाबुआमामा जन्मेका एकमात्र सन्तान हुनुहुन्छ। खेलाडीको पुर्खा र आफन्तहरूको सम्बन्धमा, उसको हजुरबा हजुरआमाको बारेमा धेरै ज्ञात हुँदैन। त्यस्तै, उनका काकी, काका, भतिजा, भान्जी र भान्जा भाइहरू अझै अज्ञात छन्,
टमास सौसेकको व्यक्तिगत जीवन:
टामास सौसेकको अन-पिच पेन्सेन्टबाट टाढा एक उत्कृष्ट डिफेन्डर र गोल धम्कीको रूपमा, उसको अफ पिच व्यक्तित्व सम्बन्धी तथ्यहरू र विचारहरू दुबै एकमत र मनपर्दो छन्। प्रशंसक र टीममित्रहरू यो तथ्यलाई स्वीकार गर्छन् कि ऊ भावनात्मक हिसाबले संचालित, नम्र र रचनात्मक छ।
प्रभावशाली मिडफिल्डर जसको राशिफल साइन मीन हो नियमित रूपमा केहि गतिविधिहरू संलग्न गर्दछ जुन आफ्नो रुचि र शौकहरूको लागि पार गर्दछ। यसमा संगीत सुन्ने, पौंडी खेल्ने, बाँदरहरू हेर्न तल यात्रा (तल हेर्नुहोस्) र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
Tomáš Souček व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु। ।: इन्स्टाग्राम।
टमास सौसेकको जीवनशैली:
टमास सौसेकले कसरी आफ्नो पैसा कमाउँछ र कसरी खर्च गर्छ भन्ने सम्बन्धमा जुलाई २०२० सम्म उनको कुल सम्पत्ति समीक्षा भैरहेको छ। जे होस्, उसले शीर्ष उडान फुटबल खेल्दा महत्वपूर्ण ज्याला र तलब कमाउँछ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिंदैन।
थप रूपमा, डिफेन्सिवल मिडफिल्डरले समर्थनबाट ईर्ष्याजनक आय बनाउँछ र निश्चित रूपमा उनीहरूको घर र अपार्टमेन्टको गेराजमा सुपर महँगो कारहरू भएका फुटबलरहरूको आरामदायी जीवन शैलीमा कुनै समस्या हुनेछैन।
Tomas Soucek's तथ्य:
हाम्रो टमास सौसेकको बाल्यकाल कहानी र जीवनी तथ्या up्कन यहाँ राख्नको लागि बचाव मिडफिल्डरको बारेमा कम ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
तथ्य # 1- Tomas Soucek वेतन:
पाउन्डमा आय ⟨£⟩
चेक कोरुना (CZK) मा आय
प्रति वर्ष € 3,585,360 $ 4,097,529 £ 3,260,281 ,,, 95,508,066०XNUMX,०XNUMX C CZK
प्रति महिना € 321,530 $ 341,461 £ 271,690 ,,, 7,958,755०XNUMX,०XNUMX C CZK
प्रति हप्ता € 74,000 $ 78,678 £ 62,529 ,,, 1,788,484०XNUMX,०XNUMX C CZK
प्रति दिन € 10,571 $ 11,240 £ 8,932 ,,, 255,497०XNUMX,०XNUMX C CZK
प्रति घण्टा € 440 $ 468 £ 372 ,,, 10,654०XNUMX,०XNUMX C CZK
प्रति मिनेट € 7.34 $ 7.8 £ 6.2 ,,, 177०XNUMX,०XNUMX C CZK
प्रति सेकेन्ड € 0.12 $ 0.13 £ 0.10 ,,, 2.9०XNUMX,०XNUMX C CZK
यो के हो टमास सौसेकले कमाएको छ तपाईले यस पृष्ठलाई हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # 2- Tomas Soucek's FIFA रेटिंग्स:
Soucek एक फिफा २०२० समग्र रेटिंग जुलाई को 2020१ अ points्कमा छ। यो भनिएको बिना कि यो केवल समयको कुरा हो यो भन्दा पहिले उसको मूल्या rating्कन Céar Azpilicueta र Wilfred Ndidi जो दुबै 81 84 रेटेड छन्।
तथ्य # 3- कुन धर्मले टमास सौसेक अभ्यास गर्छ?
डिफेन्सिवल मिडफिल्डरले सामाजिक धार्मिक मिडिया, अन्तर्वार्ता र खेलको क्षेत्रमा आफ्नो धार्मिक विश्वासको सम्बन्धमा अझै सुराग दिन सकेको छैन। जे होस्, यी कठिनाइहरू उनको इसाई भएकोमा ठूलो पक्षमा छन्।
तथ्य # 4- ट्रिभिया:
के तपाईंलाई थाहा छ सउसेकको जन्म वर्ष - १ 1995 1995aधेरै महत्वपूर्ण टेक्नोलोजिकल प्रगति र मनोरन्जनात्मक घटनाहरूको लागि महत्वपूर्ण छ? यो वर्ष डीभिडी अप्टिकल डिस्क भण्डारण मिडिया ढाँचा घोषणा भएको थियो। मनोरञ्जन दृश्यमा, १ scene XNUMX मा पोकाहोंटास र ब्याटमैन जस्ता चलचित्रहरूले सिनेमा सिनेमा हिट गरे।
तथ्य # iki विकी:
पुरा नाम टमास सौसेक
जन्म मिति फेब्रुअरी १ ​​th day day १ 27
जन्मस्थान चेक गणतन्त्रमा हभ्लकभ ब्रोड
प्ले गर्दै डिफेंसिव मिडफिल्डर
बच्चाहरु टेरेस्क (छोरी)
नेट मूल्य N /
उचाइ Feet फिट, ११ इन्च।
टमास सौसेकको जीवनीमा यस सूक्ष्म लेख पढ्नको लागि धन्यबाद। हामी आशावादी छौं कि लेखनले तपाईलाई यस तथ्यको बारेमा विश्वस्त गराउँदछ कि उसले फुटबलमा गरेका प्रगतिहरूका लागि उचित ध्यान दिनुपर्छ।
Lifebooger मा, हामी निष्पक्ष र सही बायोस प्रदान गर्नमा गर्व गर्दछौं। यदि तपाईं अवलोकन गर्न को लागी कुनै पूर्वाग्रह वा अनुचित कथन को लागी आएका छौं, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा एक टिप्पणी दिनुहोस् राम्रो गर्नुहोस्।
चित्र छवि विशेषता: यूरो २०२० क्वालिफाइ R राउन्ड चेक गणराज्य-मोन्टेनेग्रोमा टोमे सौएक टेडेáš बेडनार्ज लाई इजाजतपत्र दिइएको छ Creative Commons- सीसी द्वारा-SA 4.0.